Sancho→Man United, Ramos→PSG, Henderson→Celtic, - Axadle | Wararka Africa
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ay saaka oo Salaasa ah qoreen wargeysyada waaweyn, waxaana xuquuqda wararkan iska leh isla wargeysyada aanu kasoo xiganay oo aanu magacooda war walba ku hor qornay.
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wali xiisaynaysa laacibka garabka weerarka uga ciyaara Borussia Dortmund iyo xulka qaranka England ee Jadon Sancho, waxaanay isku dayayaan inay gacanta ku dhigaan 20 jirkan ka hor inta aanay bilaabmin ciyaaraha Euro 2020. (90 min)
Paris St-Germain ayaa dalab ka gudbinaysa difaaca Real Madrid iyo xulka qaranka Spain ee Sergio Ramos. 34 jirkan ayaa xor u ah inuu la xaajoodo kooxda uu doono marka la gaadho January 1. (AS)
PSG waxay isku dayaynaa inay heshiiska u kordhiso weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe oo 21 jir ah iyo xiddiga reer Brazil ee Neymar oo 28 jir ah. (Goal)
Everton iyo Tottenham ayaa labaduba xiisaynaya saxeexa weeraryahanka Napoli iyo Poland ee Arkadiusz Milik, iyadoo 26 jirkanna lagu heli karayo lacag dhan £10 milyan oo Gini bisha January. (Sun)
Celtic waxay xiisaynaysaa inay bisha January amaah ku qaadato goolhayaha Manchester United ee Dean Henderson oo 23 jir ah. (90min)
Barcelona ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo difaaca Arsenal ee Shkodran Mustafi. 28 jirkan reer Germany ay ayaa ah dookha labaad ee Barca ay doonayso inay lasoo saxeexato, haddii ay ku guul-darraysato inay Chelsea kala soo wareegto 27 jirka Jarmalka ah ee Antonio Rudiger. (Express)
Inter Milan iyo Barcelona ayaa labaduba xiisaynaya laacibka khadka dhexe uga ciyaara Liverpool ee Georginio Wijnaldum, inkasta oo Reds ay 30 jirkan reer Netherlands u bandhigtay heshiis cusub, ayna isku dayayso inay kusii hayso ANfield. (Calciomercato)
Arsenal, Bayern Munich, Real Madrid iyo AC Milan ayaa tartan ugu jira 20 jirka khadka dhexe uga ciyaara RB Salzburg iyo Hungry ee Dominik Szoboszlai. (Mail)
Manchester United iyo Arsenal ayaa ku raad-jooga 23 jirka Barcelona ee Ousmane Dembele oo 18 bilood oo kali ahi ka hadhsan yihiin heshiiskiisa Camp Nou. (Sport)
Xiddiga Wolves iyo xulka qaranka Spain ee Adama Traore oo 24 jir ah ayaa rumaysan in sababta uu ugu soo bilaaban la’ yahay kulamada kooxdiisu ay tahay inuu iska diiday inuu heshiiska u cusboonaysiiyo. Qandaraaskiisa hadda ayaa soconaya illaa 2023. (The Athletic)
Manchester United ayaa lala xidhiidhinayaa difaaca kooxda Sporting Braga ee David Carbo oo ah 20 jir u dhashay Portugal. (The Athletic)
Chelsea waxa ka go’an inay iibiso tiro ka mid ah ciyaartoygeeda, si ay u hesho lacag dhan £67 milyan oo Gini oo ay ku doonayso inay kusoo iibsato Declan Rice oo khadka dhexe uga ciyaara West Ham. (Express)
Tababaraha xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa u sheegay weeraryahanka Olivier Giroud inuu iskaga tago Chelsea, si uu boos uga heli karo xulka qaranka. (Sun)
Barcelona ayaa doonaysa inay iibiso afar ka mid ah xiddigaheeda bisha January, waxaanay kala yihiin Junior Firp, Samuel Umtiti, Matheus Fernandes iyo Martin Braithwaite. (Sport)